PressReader - Eyethu Baywatch: 2018-04-04 - U-polony aw­u­fanele ukudliwa yiziny­oni
U-polony aw­u­fanele ukudliwa yiziny­oni
gani wakhe, ongu­dokotela wezil­wane, u-Peirre Hens­burg, oxwayise ngen­gozi en­gadaleka kulezi ziny­oni ezidla lo-polony, ethi lezi ziny­oni zi­zophathwa yisifo so­hudo. Ekuqaleni kukaJan­uary, iqembu lokuqala leziny­oni zafa, kanti kwa­solwa ukuthi zibu­lawe wukudla lo-polony wan­suku zonke.
Inyama esuke kade ih­langan­iswa ijwayele ukuba nezinga eliphezulu (lezithako ezinyusa nezinga lesifo somd­lavuza) kanye no­sawoti owe­qile.
Uk­ufa kweny­oni yesi­bili
Ngaphambi kokuphela kuka-Jan­uary, in­y­oni yesi­bili nayo ib­i­file. Selokhu ku­vezwe lesi sigameko ko­makhel­wane nezin­dawo eza­khe­lene ne­si­funda, baningi abantu ase­bezivumele ukuthi bebenikeza ukudla okun­jengo polony iziny­oni, lapho ez­ih­lala khona. Loluhlobo lweziny­oni lubonakele lun­diza ngasedolob­heni laseMthun­zini, eban­geni elingu 5 km. Lesi senzo seza­khamizi eziphakela isidleke nga­lokhu kudla okun­galun­gele ukudliwa, si­holele ekufeni kweziny­oni.
Lokhu kukhishwa kwenyama ehlala iphiwa abantu, aku­na­sidingo, njen­goba kunen­qwaba ya­max­oxo.
U-Hugh usenxuse ku­labo abaphakela iziny­oni, ukuba bangaziphakeli up­olony, ngoba awuk­u­fanele ukudliwa yiziny­oni, awu­nayo impilo.
Okunye ukudla okun­gadliwa yinyama ex­ut­shiwe, okuthi uma kuphakelwa iziny­oni, kube ngumthamo om­n­cane. Ukondliwa kweziny­oni esikhathini esiningi, kwen­zelwa ukuzuzisa labo abaziphake­layo, kodwa hhayi ukuhlo­mulisa zona iziny­oni, eziphila
Enye yeziny­oni idla u-polony
Ngokukhangezwa.Kubongwa kakhulu: Hugh Chit­ten­den, Nick Ni­chol­son no Peirre Hens­burg.